FIFAMPITIFIRANA NAHAFATY :: Nalevin’ny fokonolona ny razan’ ilay lehilahy maty • AoRaha
FIFAMPITIFIRANA NAHAFATY Nalevin’ny fokonolona ny razan’ ilay lehilahy maty
Lehilahy iray tsy fantatra ny mombamomba azy no maty voatifitry ny zandary tany Beanamamy-Tsinjoarivo any Belobaka-distrikan’i Tsiroanomandidy,Faritra Bongolava afak’omaly maraina. Nifanena tamin’ ireo mpitandro filaminana manao fisafoana io lehilahy io, araka ny fantatra, ka avy hatrany dia nampiasa ny basy poleta teny aminy
rehefa nasain’ireo zandary nijanona mba hosavaina. Vokatry ny tifitra nataon’ireo zandary, ho setrin’ny fandavan’ilay lehilahy ny baikon’ny mpitandro filaminana sy ny fandraisany ny basy poleta teny aminy, dia namoy ny ainy izy.
Tsy nahitana taratasy milaza ny mombamomba azy teny amin’io lehilahy namoy ny ainy io rehefa nosavaina taorian’ny fahafatesany. Voalaza fa mbola tratra teny aminy ny basy poleta vita gasy, izay nahitana balana basim-borona miisa roa tao anatiny. Ahiahian’ireo zandary sy ny mponina any Beanamamy, Belobaka ho dahalo na olon-dratsy izy saingy tsy misy mahalala azy ireo olona mpiray tanàna sy ireo izay efa nijery azy, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
HALATR’OMBY SY FAKANA AN-KERINY :: Ankizy telo sy vehivavy roa lasa takalon’aina